कसरी तपाइँको प्रेस विज्ञप्ति रोबोटले पढेको हो र मानवले पढेको छैन भनेर कसरी पक्का गर्ने?
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » उड्डयन » कसरी तपाइँको प्रेस विज्ञप्ति रोबोटले पढेको हो र मानवले पढेको छैन भनेर कसरी पक्का गर्ने?
उड्डयन • हवाई ताजा समाचार • समाचार • प्रेस बिज्ञप्ति • प्रविधि • अहिले प्रचलनमा • विभिन्न समाचार
एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दा के तपाईं कुराकानी भइरहेको छ? जबकि पीआर एजेन्सीले राम्रो मिडिया रिलीज लेखेको छ, धेरै एजेन्सीहरू स्वतन्त्र प्रकाशनको आशामा मिडिया डाटाबेसहरूको सूचीमा यस विज्ञप्तिलाई मंथन गर्दछन्। यो के हो उद्योगलाई "अर्न गरिएको मिडिया।" अर्कोतर्फ, "सशुल्क मीडिया" ले तपाइँको ब्रान्डि and र मेसेजि their मा आफ्नो विज्ञप्ति पूर्ण नियन्त्रण प्रसारण गर्दछ। eTurboNews यसमा थप दुई स्तरहरू थपियो, र यसको मतलब सफलताको आधारमा मात्र भुक्तान गर्ने।
प्रसारण प्रेस विज्ञप्ति ठूलो व्यवसाय हो, तर प्रकाशनहरू जस्तै eTurboNews यो पैसा कमाउने ब्यापारको प्रायः आर्जन पक्षमा हुँदैन,
पीआर न्यूजवायर जस्ता ठूला वितरण तार सेवाहरू पुलिकेसनमा विज्ञप्ति प्रसारण गर्न भुक्तान गरिन्छ, र एकै साथ प्रमुख प्रकाशनहरूमा इजाजतपत्र शुल्क लिँदै छ।
धेरै पटक प्रेस विज्ञप्तिहरू याहू वित्त, व्यवसाय जर्नल, र पोर्टलको लुकेका फिर्ता पृष्ठहरूमा समाप्त हुन्छन् र सम्भावित पाठकहरूको संख्या अनुमान गर्न प्रभावशाली रिपोर्टहरू उत्पन्न गर्दछ।
eTurboNews अब सुनिश्चित गर्दैछ कि ईटीएन पोर्टलमा प्रकाशित वाणिज्यिक प्रेस विज्ञप्तिको पाठक वास्तवमै मानव हो र रोबोट होइन।
केही तार सेवाहरू द्वारा पोष्ट गरिएको प्रेस विज्ञप्तिको लागि वितरण रिपोर्टहरूको विश्लेषण गर्दा, एक अर्कासँग कुरा गरिरहेका कम्प्युटरहरू फेला पार्न सकिन्छ। रिलिज पोष्ट गर्ने कम्पनीले अक्सर लाखौं-स numbers्ख्यासहितको रिपोर्टहरू प्राप्त गर्दछ जब वास्तवमा दुई सय जनाले एउटा वैध प्रकाशनमा यो कथा प्रकाशित गरे। मुठ्ठीभर भन्दा कम मानिसहरूले यस विमोचनलाई खोले र पढे, परिणामस्वरूप रिलीजको सामग्रीमा समावेश भएका लिंकहरूमा केही क्लिकहरू भए।
एक विज्ञप्ति को लागी लागत हजारौं मा धेरै कम परिणाम संग जान सक्छ।
कमाईएको मिडियाको मतलब प्रकाशनहरू जुन वास्तवमा चाहिने दर्शकहरू हुन् यो जहिले पनि यो चेनको गैर-अर्जन पक्षमा हुन्छन्। त्यहाँ एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्न एकदम थोरै प्रोत्साहन छ कि विज्ञापन विज्ञापन सामग्री।
eTurboNews भन्दा बढि पुग्छ २ लाख व्यक्तिगत पाठकहरू प्रत्येक महिना र एक जीत / जीत समाधानको साथ आए: मानव पाठकहरु!
eTurboNews नयाँ असीमित रिलिजिंग योजनाहरू केवल ग्राहकलाई चार्ज हुने आश्वासन दिनुहोस् जब पाठक वास्तवमै प्रेस विज्ञप्ति खोल्नको लागि पर्याप्त उत्प्रेरित हुन्छ, यसलाई पढ्छ र उसले रुचि राखेको लिंकमा क्लिक गर्दछ। प्राय: लिंक कम्पनीको वेबसाइटमा पोस्टिंग वेबसाइटहरूमा जान्छ।
एक पटक पाठकले यस्तो लिंकमा क्लिक गरेपछि, योजनामा ​​निर्भर गर्दै, प्रति क्लिक १ c सेन्टदेखि १.15० सम्म प्रति शुल्क हुनेछ। अधिकतम चार्ज प्रति रिलीज १००० क्लिक भन्दा बढी हुँदैन।
यो चासो मा छ eTurboNews वाणिज्यिक विज्ञप्ति राम्रोसँग राख्नको लागि, कुञ्जीशब्दहरू र मसलादार हेडलाइटहरूको लागि यसलाई विश्लेषण गर्नुहोस्, र यसलाई खोज इञ्जिनहरू, समाचार एपीपीएस, र गुगल समाचार जस्ता एग्रीगेटर समाचार सेवाहरूको लागि स्थान दिनुहोस्।
प्रत्येक प्रेस विज्ञप्ति eTN पुरस्कार विजेता ग्लोबल ईमेल न्यूजलेटर्स मा शामिल गरिनेछ। १/२ लाख भन्दा बढी पाठकहरूले आफ्नो कम्प्युटर टर्मिनलमा पुश सूचना प्राप्त गर्नेछन् कहानीको लिंकसँग रिलीज हेडलाईन देखाउँदै।
प्रेस विज्ञप्ति पोस्ट गरियो eTurboNews अडियो फाइलमा रूपान्तरण गरियो र पोस्ट गरियो eTurboNews। यो पनि रूपान्तरण हुनेछ पोडकास्ट।
पोडकास्टहरूaमा परिवर्तित हुन्छन् प्रत्यक्षप्रवाह भिडियो र १ 16 भन्दा बढी प्लेटफर्महरूमा पोष्ट गरिएको, YOUTUBE, एप्पल, साउन्डक्लउड, एch्कर, Google, आदि समावेश सहित।
रिलिज 50० भन्दा बढी भाषाहरूमा अनुवाद हुनेछ र ईटीएनको नयाँ, स्वतन्त्र, र समर्पित विदेशी भाषा समाचार पोर्टलमा समावेश हुनेछ।
यी सबै मानवले गरेका छन् जसले ख्याल राख्दछन् कि संसारका धेरै सँगी मानवहरूलाई प्रेस विज्ञप्तिको सामग्री पढ्न र अन्तर्क्रिया गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
ती सदस्यहरूले असीमित सदस्यता योजनाहरूमा सदस्यता लिने प्राथमिकता विचार आउँदो ईटिटोरियल कथाहरू भित्र उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यस्ता सदस्यहरूलाई दैनिक ईटीभी समाचार प्रसारणमा अन्तर्वार्ताका लागि आमन्त्रित गरिन्छ, वा सहभागी लाइभ स्ट्रिम प्यानेल छलफलमा एक सहभागी वा पाहुनाको रूपमा।
असीमित सामग्री पोस्टिंग सदस्यता सदस्यता योजनाहरूले पनि मा एक मानार्थ सदस्यता प्राप्त गर्दछ विश्व पर्यटन नेटवर्क (WTN)।
थप जानकारी: www.travelnewsgroup.com / असीमित
मानव प्रेस विज्ञप्ति मा अधिक जानकारी